वाइडबडीकाे निसाफ गर्ने के प्रधानमन्त्री न्यायाधीश हो ?
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा दाेषी निर्दाेषकाे फैसला गर्ने काम प्रधानमन्त्रीकाे नभएकाे बताएका छन् । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ गण्डकी प्रदेशले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
निधन भएका रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष भएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अनुपयुक्त भएको उनले बताएका हुन् । रवीन्द्र अधिकारीको अन्त्यष्टि नसकिँदै उनी निर्दोष भनेर फैसला गर्ने प्रधानमन्त्री न्यायाधीश हो ? त्यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो ? भन्दै प्रश्र गरेका थिए ।
वाइडबडी, बूडीगण्डकी अथवा एनसेल प्रकरणमा ठूला नेता नै दोषी भए पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘पदमा बसेको जथाभावी जे मन लाग्यो बोल्दै हिँड्न मिल्दैन ।’